Meeshaalee qubeeffannoo, kuusfaayaa faayoo wantaa isa ati galmee kee keessatti dabalachuu dandeessuu, fi sagantaa qindeesiituu barbaachissaa of keessaa qaba.
Qubeeffannoo hojeekaan mirkaneessa.
Baafata xiqqaa bakka ajajawwan afaan murta'aatti filuu dndeessu bana.
Dhangii lakkoofsa fi sadarkaa, lakkaawwii boqannaaf, galmee ammaa keessatti ifteessa.
Galmee ammaa keessatti, lakkoofsoota sarara dhangeessa, akkasuumas ida'a yk haqa. keewwata tokko lakkaawwii sarara irraa qoqqobuuf, keewwaticha keessa cuqaasiitii, Dhangi'i - Keewwata filadhu, caancala Lakkaawwii cuqaasi, kana booda saanduqa filannoo Keewwata kana lakkaawwii sarara keessatti dabali qulqulleessi.
Ijaarsa agarsiissaa, Miiljaleewwanii fi ibsadabalataawwaniif ifteessa.
Kuusaa Deetaa Wabii
Gargaartuu Makiinsa Ergannoo
Masaka Makiinsa Ergannoo uunka qubeewwanii uumuuf, yk dhaamsa ergaa-e fudhataa hedduudhaaf, erguu eegala.
Foormulaa filatamee heeregeetu, bu'aasaa gabatee muraatti gargalcha.
Maalimaawwan galmee ammaa keessaa, isa qabeentoota xabboo, akkasuumas dirreewwanii fi kasaawwan qabu haaroomsa.
Taphataa Meeshaalee sub-qunnamtii
Maakroo akka galmeessitu yookin gurmere ssituuf gulaaltuu si'i gargaara
Ijaarsa Gingilchaa XML
Qaaqa Qindaa'ina Gingilchaa XML, innis iddoo itti uumuu, gulaaluu, haquu, fi faayilii XML olerguu fi aleerguuf gingilchaa itti yaaluu dandeessuu dha.
Dirqaalee ofumaan barruu akka barreesitu bakka buusuu qindeessa.
BarruuUfmaa uumaa, gulaala, saaga. Akka BarruuUfmaatti barruu dhangeeffame, barruu saxaatoo waliin, gabateewwan fi dirreewwan kuusuu ni dandeessa. Atattammaan BarruuUfmaa saaguuf, BarruuUfmaa galmee kee keessatiif qaxxaamura barreessiitii, kana booda F3 dhiibi.
Ajajni kun gongee dhaamsaa sagantaa tuujjee maamileeffameetiif bana.
Title is: Meeshaalee